Qurxinta Guriga Jumlada ah Dhirta dabiiciga ah ee carafta leh Wax soosaareysa Warshada iyo saarayaasha | Winby
Qurxinta Guriga ee Qurxinta Dabiiciga ah ee Soy Wax Cube ah oo dhalaalaya tarts
Waxaa laga sameeyey wax soy-dabiici ah oo dabiici ah, gacantan lagu daadiyey daamanka waxay keenaan gubasho nadiif ah waana fududahay in la isticmaalo. Waxyaabaha dhalaalaa waa beddel bedbaad u ah shumacyada soo jireenka ah, markaa waad ku raaxeysan kartaa caraftiisa.
Cub Kuwani xabadaha dhalaalaya ayaa qolkaaga ka buuxin doona caraf udgoon fiican. Waxay ku habboon tahay qolalka jiifka, qolalka fadhiga, musqulaha, xafiisyada, iyo meel kasta oo kale oo aad rabto inaad hawada ku cusbooneysiiso.
● waxaan aqbalnaa qaabeynta, waxaad noo soo diri kartaa nashqaddaada ama sumadahaaga gaarka ah, wen ayaa kaa dhigi kara inaad marka hore muunad qaaddo oo aad qanciso dalabaadkaaga.
Cabbirka: 7.5cm (Length) * 5.5cm (Width) * 2.3cm (Dherer)
Dabiiciga udgoon ee wax udgoon ayaa dhalaaliya baloogyada
Qalabka wax dhalaalaya ma laha wick waxaana loo isticmaali karaa kuleyliyaha.
Waxyaabahan dhalaalaya ayaa ah kuwo nabdoon oo jawi-saaxiibtinimo leh, kuubbadaas wax dhalaalaysa ah ayaa gacanta lagu shubayaa wax soy wax u ah gubasho nadiif ah.
Waxyaabaha soyka ah ee dhalaalaya waxaa lagu sameeyaa iyadoo la isticmaalayo wax kasta oo soy dabiici ah iyo saliida udgoon ee ugu tayada sareysa. Dareemadu waxay ku habboon yihiin qolalka jiifka, xafiisyada ama guryaha.
Kala baxa ama dunta dhoobada wax ayaa dhalaalaa waa caan sababtoo ah waa qaali mana ku habboon yihiin.
Miiraha badanaa waxaa lagu sameeyaa 6 qol, caag caarada lagu dhejiyo.
Cube kastaa waa qiyaastii 1/2 oz. waxayna bixin doontaa ugu yaraan 8 saacadood.
Waxaad ka dooran kartaa caraf ama udgoon liiskayaga udgoonkeena, sida lavender 、 vanilla 、 rose 、 strawberry 、 liin 、 ocean, iwm.
Waxyaabaha Wax soy dabiici ah
Cabir 7.5cm (Length) * 5.5cm (Width) * 2.3cm (Dherer)
Astaanta/ summad Custom sida macaamiisha 'looga baahan yahay
Wax miisaanka 70g
Waqtiga gubashada 14 saacadood
Hore: Shumacyada qurxinta leh ee udgoon leh sool leh kristantar keyd ah
Xiga: Wick Shumaca Wick oo leh Waxyaalaha Paraffin Wax Dahaarka leh
Wick Shumaca Wick oo leh Waxyaalaha Paraffin Wax Dahaarka leh
Tiir qaab shumac dabiici ah soy wax udgoon
Shumaca muraayadda qalinka elektaroonigga ah ee elektarooniga ah leh daboolka birta
quraarad hufan shumac caraf udgoon ah